Toro-hevitra ho an'ny mpitarika
Andraso ny ondrin’ Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ ny sitrapo [araka an’ Andriamanitra]; tsy amin’ ny fitiavana harena maloto, fa amin’ ny zotom-panahy; tsy ho mpanjakazaka, amin’ ny anjara-fiandrasana, fa ho fianaran’ ny ondry. 1 Petera 5:2,3
Notoroina hevitra aho hilaza toy izao amin'ireo anadahy manao asa fanompoana : Aoka ny hafatra entinareo izay mivoaka eo am-bavanareo, ho vokatry ny herin'ny Fanahin' Andriamanitra. Raha misy fotoana ilantsika, ny fitarihana manokana avy amin'ny Fanahy Masina, dia amin'izao andro izao. Mila fanokanana mahery isika. Fotoana izao, hanehoantsika amin'izao tontolo izao ny herin' Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sy ny asa fanompoana ataontsika.
Irin'ny Tompo ny hahita ny fitoriana ny hafatry ny anjely fahatelo amin'ny fahombiazana mitombo hatrany. Tahaka ny niasany nandritra ny taona maro nifandimby, ka nanolorany fandresena ho an'ny vahoakany, no mbola hitondrany koa ankehitriny ny andraikitry ny fiangonana ho amin'ny fahatanterahana feno fandresena. Mandidy ny olo-masina mpino Azy Izy mba handroso amim-piraisana fatratra, handeha avy amin'ny hery ho amin’ny hery lehibe kokoa, avy amin'ny finoana ho amin'ny fahazoana antoka, mitombo sy ny fatokiana ny marina ny fahamarinan'ny asany.
Ilaintsika ny ho tafajoro tsy azo hozongozonina toy ny vatolampy, amin'ireo fitsipiky ny Tenin'Andriamanitra, ary hahatsiaro fa Andriamanitra dia eo anilantsika. Ka manome hery antsika hiatrehana ny fanandramana vaovao tsirairay. Aoka hohazonintsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika ireo fitsipiky ny fahamarinana, mba bahatonga antsika handroso avy amin-kery ho amin'ny hery, amin'ny anaran’ny Tompo. Ilaintsika, ny hitahiry ny finoana ho masina indrindra, izay voaporofon’ny fampianarana sy ny faneken’ny Fanahin'Andriamanitra hatramin'ny fanandramantsika voalohany indrindra ka mandrak’ankehitriny. Ilaintsika ihany koa ny hikolokolo amim-pitiavana ny asa sarobidy izay tontosain’ny Tompo amin'ny alalan'ireo vahoakany mpankatô ny didiny, sy ireo izay hitombo hery ka ho tonga mahomby araka ny handrosoan’ny fotoana, noho ny herin’ny fahasoavany.Ny fahavalo dia mikatsaka ny hampanjavozavo ny saina mahay manavaka ananan'ny vahoakan'Andriamanitra, ka hampahosa ny fahombiazan'izy ireo. Fa raha miasa araka ny fitarihan'ny Fanahin'Andriamanitra kosa izy ireo, dia hosokafany eo anoloan'izy ireo ny varavaran'ny tombontsoa hahafahan’izy ireo miasa ho fanorenana indray ireo toerana rava fahiny. Ho voasokajy ho isan’ny fanandramana mitohy tsy misy fahatapahany ny fanandraman’izy ireo, mandra-piverin'ny Tompo indray hidina amin-kery sy amim-boninahitra, hanisy tombokasen'ny fandresena farany eo amin'ireo vahoakany mahatoky.